नागरिकले गाँसबासको माग गरिरहेका बेला सरकार पानीजहाज र रेलको कुरा गर्छ (भिडियोसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
नागरिकले गाँसबासको माग गरिरहेका बेला सरकार पानीजहाज र रेलको कुरा गर्छ (भिडियोसहित)
access_time२०७६ साल फाल्गुन ६ गते, मंगलवार ०१:१२ PM chat_bubble_outline Comments folder_open अन्तर्वार्ता भिडियो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । केही समयअघिसम्म दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकारसँग नागरिकले अपेक्षा धेरै थियो ।
तर‚ यो अवधिमा सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भनी प्रतिपक्ष दल र नागरिकहरुले बताइरहेका छन् । प्रतिपक्ष दल र नागरिकहरुको भनाइमा सत्यता छ ? वा उनीहरुको आक्रोस मात्र हो ? यसै सेरोफेरोमा राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारको दुई वर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारको मुख्य काम संघीयताको कार्यान्वयन थियो । संविधानको मर्म बुझेर कार्ययोजना तय गर्नु थियो । नागरिकको दैनिक समस्या समाधान थियो । तर‚ सरकार यसमा असफल भएको छ । अर्थात् यस अवधिमा सरकार संघीयताको कार्यान्वयन, समाजवादको कार्यदिशा, विकासका काम सबैमा असफल भएको छ ।
सरकारको प्राथमिकता मिलेको छैन । नागरिकहरुलाई आधारभुत पूर्वाधारको अभाव छ । नागरिकले आफ्नै गाउँमा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी भए हुने भनिरहेका बेला सरकार भ्यु टावरको कुरा गरिरहेको छ । पानी जहाज, रेल इत्यादिको कुरामा व्यस्त छ ।
सरकारले देखाएको तथ्याङ्क गैरसरकारी संस्थाहरुले तयार पारेको जस्तो छ । तथ्याङ्कको स्रोत पनि गतिलो छैन । सरकारले आफ्नो काम अर्थशास्त्री ढाँचाबाट भन्दा पनि जनताको मतबाट प्रमाणित गर्ने हो । सरकारको तथ्याङ्कले नागरिकको मन छुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकमा आशा जगाउन रेल, पानी जहाजका कुरा गर्नुहुन्छ । तर‚ नागरिकको समस्याको कुरा गर्नुहुन्न । सपना देख्नु अपराध होइन । तर‚ सपनासँगै नागरिकको तत्कालको समस्यामा सरकार जोडिन सक्नुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा परिवर्तन आएको छैन । पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । ठूला परियोजनाहरुमा भएका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राज्य पुनर्संरचनाको बहस‚ भयो सरकारले गर्न सकेन ।
सरकारले कर्मचारीका कारण काम गर्न सकिएन भन्छ । यति शक्तिशाली सरकारले कर्मचारीकै कारण काम गर्न सकिएन भन्नु हाँस्यस्पद कुरा हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र काविल छैन । जनमुखी छैन । व्यक्तिले भन्नु ठिक छ तर सरकारले भन्न पाउँदैन । किनकि‚ कर्मचारी संगठन पुनर्संरचना गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।
त्यसैले नागरिकले महसुस गर्ने सक्ने गरी सरकारले गर्नु छ भने आफ्नो प्रथामिकता फेर्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनातर्फ लाग्नुपर्छ । सरोकारवालासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु हुन्छ ?
स्थानीय सरकारको पनि अवस्था उस्तै छ । कामको प्राथमिकतामा चुकेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र बढी जोड दिएका छन् । तर‚ बजेट कम छ । त्यसैले सीमित स्रोतले पूर्वधारका काम गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । त्यो गरेन । चुनावपछि लु गरिखाउ भनेर छोडेको जस्तो गर्योर ।
अहिलेको जस्तो सरकार गठन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नै नयाँ घटना हो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले नागरिकका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेको छैन । यसले नागरिकमा सरकारको काम कारबाहीप्रति निराशा पैदा गरेको छ । तर‚ नागरिकसँग विकल्प छैन । दिनै आन्दोलन गर्न आउने जात पनि होइन । यस्तो अवस्थामा नागरिकमा उत्साह ल्याउन तीनै तहका सरकारले समाजवादी कार्यक्रमसहित नागरिकको दैनिकीमा सहजता सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।
रामेछापको डप्खास्थित पसलमा आगलागी